भारतमा पनि आइपुग्यो खतरनाक कोरना भाइरस, स्कुलहरु बन्द ! – " सुलभ खबर "
भारतमा पनि आइपुग्यो खतरनाक कोरना भाइरस, स्कुलहरु बन्द !
नयाँ दिल्लीः दिल्लीमा कोरोना भाइरसको पहिलो सं’क्रमित भेटिएपछि दिल्लीको नोएडामा दुई निजी विद्यालय केही दिनका लागि बन्द गरिएको छ । विद्यालयले इमेल र वाट्स एपमार्फत विधार्थीका अभिभावकलाई जानकारी गराएका छन् । विद्यालय बन्द गरेकोमा नडराउन समेत आग्रह गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
दिल्लीमा जो व्यक्ति भाइरस सं’क्रमित भएका थिए, उनको बच्चा नोएडास्थित विद्यालयमा पढ्छन् । उक्त व्यक्ति विदेशबाट फर्केपछि घरमा पार्टी गरेका थिए । त्यो पार्टीमा पाँच परिवार र १० जनाको उपस्थिति रहेको थियो । पार्टीपछि जाँचमा उनी भाइरस सं’क्र’मित भएको देखिएको हो । यस घटनापछि केही समयका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएको छ ।
सं’क्र’मित भएका ती व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका अन्यलाई पनि छुट्टै घरमा राखिएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिममा सबैभन्दा बढी ती व्यक्ति हुन्छ, जसमा रोगसँग लड्ने कम क्षमता हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी जोखिममा पर्ने गर्छन् ।
विद्यायलयले संक्रमित व्यक्तिको बच्चाको सम्पर्कमा आएका अन्य विद्यार्थीहरुलाई पनि दुई हप्ताको लागि अरु बाट टाढा राखिएको छ । यस्तै विद्यालयको सार्वजनिक ठाउँ र कक्षा कोठाहरु सफा गरिएको छ ।
बाइडेनको सपथ समारोहमा लेडी गागाको प्रस्तुती हुने
काठमाडौँ– अमेरिकाको ४६औँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनको सपथ समारोहमा सुपरस्टार अमेरिकी गायिका लेडी गागाले राष्ट्रियगान
एजेन्सी, २९ पुष । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अहिले जति हमला कहिल्लै
अमेरिकामा कोरोनाबाट एकै दिन ४ हजार बढीको ज्यान गयो
संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोभिड १९ को मृत्युमा नयाँ रेकर्ड देखिएको छ । यहाँ एकै दिन
दुई दिन लगातार बढेको सुनको मूल्य आज बढ्यो !
४८ वर्षका मुख्यमन्त्री राई र २० वर्षीय मिस मंगोलको प्रेम कहानी ! उमेर भनेको एउटा नम्बर मात्रै हो
टोखा घटनामा नयाँ रहस्य, ‘सुदिक्षा जिउँदै हुँदा दिदी शर्मिला बहिनी भेट्न पुगेकी थिइन्’
धुम्रपान गर्नेलाई कोरोनाभाइरस संक्रमणको खतरा कम !